Ikhaya Esekelwe Franchise - Umsebenzi ovela Ekhaya Franchise | Franchiseek
Ikhaya Esekelwe Franchise
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Ikhaya Esekelwe Franchise
Okukhonjisiwe Kwasekhaya Franchise
I-Franchise Yasekhaya Yamuva
Ingqikithi Yomhlahlandlela Oya Franchise
Ingqikithi Yomhlahlandlela Wethuba LaseFranchise Ubuwazi ukuthi ngaphezulu kwe-50% yezindleko zomkhangisi we- £ 15.7bn kuzohamba nge-digital kanye ...
Knockout UBUYELA Boutique ejimini Franchise zimali savvy - izindawo Prime etholakalayo phesheya UK - utshalomali okuphansi: evulekile ezintathu 9Round ...
Mayelana ne-Agency Express I-ejensi Express Franchise iyinkampani yebhodi enkulu kunazo zonke yezwe yase-UK kuphela futhi eyinkampani yezindlu ...
I-Home based Franchise ingenye yezinketho ezithandwa kakhulu zama-franchise, futhi enye yezindleko eziphansi kakhulu. Ngoba ama-franchise asekhaya awadingi ukuthi ube nezakhiwo ezingeziwe, imvamisa aqala kusuka ekutshaleni imali ephansi kakhulu futhi ngokuvamile adinga ukuthi udinga ifoni ne-laptop kuphela. Izindleko zokuqalisa elinye lalawa mabhizinisi asendlini zivame ukwehla kakhulu kunezindleko ezithintekayo ekuqalisweni kwe-franchise esehhovisi noma esitolo.
Izinzuzo ze-Fradise Yasekhaya
Kunokusizakala okuningi kokuba nokuba ne-franchise esekhaya, akumangazi ukuthi abantu abaningi manje sebekhetha ukusebenza ekhaya.
Ukuvumelana nezimo - usetha uhlelo. Iningi lama-franchisees abazobe sebakhethelwa i-franchise esekhaya ngoba libenza bakwazi ukulingana namaphethini abo okusebenza azungeze umndeni wabo nokuzibophezela komuntu siqu. Ama-franchise amaningi asuselwa ekhaya ayingxenye yesikhathi, okusho ukuthi ungawahlanganisa nawo cishe kunoma yimiphi imisebenzi ekhona ongaba nayo.
Ukutshalwa Kwezimali eziphansi - Ngokuvamile i-franchise esekwe ekhaya idinga kuphela ukuthi ube nefoni, i-inthanethi ne-laptop / ikhompyutha. Ngaphandle kokudinga ihhovisi, usuvele unayo indawo osebenza kuyo. Izimali ezisele ezisele zokutshala imali zivame ukumboza izinto ezifana newebhusayithi yakho, ezime, izikhangiso zenjini yokusesha kanye nokusebenzisa igama lomkhiqizo le-logo.
Ukuba semzini wakho -Ukusho ukuthi inzuzo enkulu kunazo zonke ukuba semzini wakho. Kusho ukuthi akudingeki ukhathazeke ngokuthola ingane, kusho ukuthi akudingeki ulwe nethrafikhi yehora, futhi okubaluleke kakhulu kusho ukuthi ungasebenza usendaweni yokunethezeka kwekhaya lakho.
Enye inzuzo yamathuba wempahla yasekhaya ukuthi uzenzele ibhizinisi lakho, kepha hhayi wena. Ngokungafani nesiqalo sebhizinisi, i-franchise iyimodeli yebhizinisi efakazelwe neliphumelelayo eye yaphindwa yenziwa kuwo wonke ama-franchisees amaningi nezindawo zawo.
Izinhlobo Zekhaya Franchise Yasekhaya
Kunezinhlobo eziningi zamathuba asezingeni elifanele asekhaya namuhla, amelela ithuba lokuba umphathi wakho ngenkathi usebenza ekhaya lakho. Ukuze uphumelele nge-franchise esekhaya, njenganoma yiliphi i-franchise, ukuthi udinga ukukhetha okuthile oyithandayo. Uma kungenjalo, ungazithola usuhlehlisa futhi ngeke usebenze kahle.
Nazi izinhlobo eziningi zamafranchise asuselwa ekhaya aseFranchiseek athola ukuthi adumile.
Izikhungo Zokuphatha - Ama-franchise wokuphatha awadingi njalo ukuthi ube nehhovisi. Izikhungo zokuphatha zivame ukusekelwa ekhaya lapho uphatha iqembu labasebenzi elenza umsebenzi wezandla. Imisebenzi yakho izobandakanya ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi bagcina ukukhiqiza okuphezulu futhi babhekane nanoma ikuphi ukukhathazeka iqembu lakho elingaba nakho.
Izitolo Franchise - kusuka ekuthengiseni amaholide njengendawo esetshenziselwa ukuhamba ekhaya, kuya ekuthengiseni nasekusebenziseni izingcingo, kunezindlela eziningi zokuthengisa ezingasetshenziswa ekhaya.
I-Digital Marketing kanye ne-SEO franchise - ama-franchise afana ne-Start Up Edge ahlinzeka ngohlobo lokukhangisa lwedijithali kanye nezinsizakalo ze-SEO kumakhasimende abo, kufaka phakathi ukwakhiwa kwewebhusayithi ne-PPC. I-Digital Marketing Franchise ingasebenza kusuka ekunethezekeni kwasekhaya lakho ngenkathi kusiza elinye ibhizinisi ukukhula futhi liphumelele.